Mumwe wevatengi vedu aida dhizaini nyowani yepeji ravo repamba izvo zvaida zvakati wandei zvekusimudzira mukati memapeji emusoro wenyaya. Pataive takakura nezvekutaura kodhi, isu tanga tisina kuisa gwaro rakazara pane ese mafaera uye akavandudzwa mafaira atakange tagadzira uye isu tanga tisingatarise shanduko imwe neimwe kuita dura (vamwe vatengi havadi izvozvo). Mushure mechokwadi, hazvinakidze kudzokera uye kunoongorora
Tumult Hype 2 yeOSX: Gadzira uye Ita Anime HTML5
Chipiri, August 20, 2013 China, May 8, 2014 Douglas Karr
Tumult Hype ndeye Mac OS X application iyo inokutendera iwe kuti ugadzire inopindirana zvemukati uye mifananidzo muHTML5 webhu zvemukati. Mapeji akavakwa neTumult Hype anoshanda pamatafura, mafoni uye iPads pasina kukodha kunodiwa. Unogona kutenga kopi yeTumult Hype 2 kubva kuApp Store kusvika Sept 10th ye $ 29.99! Iyo Hype (Mac OS X) vhezheni ine eniki uye inowirirana maficha, anosanganisira: Mifananidzo - Tumult Hype's kiyi-yakakosha-based animation system inounza yako